Codsi tabaruca | Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka ee Ota Ward
-Caawimaad qof kastaa ka helayaa waxay taageeri doontaa farshaxanka dhaqanka ee Ota Ward waxayna horseedi doontaa abuuritaanka magaalo dhaqameed soo jiidasho leh-
Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward wuxuu ku howlan yahay mashaariic kala duwan si uu gacan uga geysto dib u soo nooleynta Ota Ward iyo abuuritaanka magaalo dhaqan soo jiidasho leh iyada oo loo marayo farshaxanka dhaqanka.
Waxaan ka faa'iideysan doonnaa deeqaha aan helno si dad badani u abuuraan fursado ay kula soo xiriiraan dhaqanka iyo farshaxanka.
Sidaa darteed, waxaan kaa codsaneynaa taageeradaada iyo taageerida ujeedada howlaheena.
Toshiaki Uejo, Madaxweynaha, Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward
Marka hore fadlan nala soo xiriir.Waanu kuu soo sheegi doonaa nidaamka.
Ganacsiyada hadda raadinaya taageerada
Waqtigan xaadirka ah, waxaan raadineynaa taageero mashruucyada soo socda.
Bandhiga Tiyaatarka Magome Bunshimura 2021
Foomka dalabka deeqda
Ku saabsan dhiirrigelinta canshuuraha deeqaha
Deeqaha la siiyo ururkeenu waxay xaq u leeyihiin dhiirrigelin cashuur.Soo celinta canshuurta ugu dambeysa ayaa loo baahan yahay si loo helo daaweyn mudnaan leh.Intaas waxaa sii dheer, markii la xareynayo soo-celinta canshuurta ugu dambeysa, "Shahaadada Qaadashada Lacag-bixinta" ee ay soo saartay Ururka ayaa loo baahan yahay.
Waad dooran kartaa inaad hesho jar jarid tabaruc ahaan dakhli ahaan ama ka-goynta tabaruca gaarka ah oo ah cashuur-bixin, hadba ka faa'iido badan.Wixii faahfaahin ah, fadlan tixraac bogga NTA.
Waxaad xaq u yeelan kartaa canshuurta degenaanshaha shaqsiyeed iyo jarista canshuurta dhaxalka.Canshuurta degenaanshaha shaqsiyeed waxaa loola dhaqmaa si ka duwan iyadoo kuxiran waaxda, magaalada, magaalada, iyo tuulada, markaa fadlan ka hubi waaxdaada, magaalada, magaalada, ama tuulada wixii faahfaahin ah.
Hoyga Wakaaladda Canshuuraha Qaranka
Waad goyn kartaa goynta si gooni ah deeqda guud.Wixii faahfaahin ah, fadlan tixraac bogga NTA.
Aasaaska Danta Guud ee Dadweynaha Ota Ward Qeybta Maamulka Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka TEL: 03-3750-1611